သင့်လက်ဖဝါးကပြောတဲ့ သင့်အနာဂတ်၊ အိမ်ထောင်ဖတ်၊ စီးပွားဥစ္စာ တို့အကြောင်း – သုတရသ
သင့်လက်ဖဝါးကပြောတဲ့ သင့်အနာဂတ်၊ အိမ်ထောင်ဖတ်၊ စီးပွားဥစ္စာ တို့အကြောင်း
နိမိတ်ဖတ်လက္ခဏာ ဗေဒပညာနဲ့ပတ်သတ် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဗေဒင်ဟောလာတဲ့သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ ဘယ်အရာမှ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့မနေဘဲ သေသေချာချာ ဟောကြားရင်း လေ့လာထားတဲ့ လက္ခဏာအရေးအကြောင်းလေးတွေကို မှတ်စုမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှတ်တမ်းလေးတွေထဲကနေပြီး လက္ခ ဏာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မည်သူမဆို မိမိတို့ရဲ့လက် တွေဖြန့်ကြည့်ရင်း တိုက်ဆိုင်ကြည့်နိုင်အောင် ရေး သားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.
နံပါတ်(၁)ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း အသက် လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ ထောင်တက်လာတဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ အပေါ်ဘက်မှာ ရှိတဲ့Óာဏ်လမ်း ကြောင်းကို သွားထိနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်မယ်၊ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပိုင် ဆိုင်ပြီးတော့ တန်ခိုးသြဇာထက်မယ့်သူ၊ နောက်ပြီး အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့ ရာထူးတက်တာတို့၊ ဒီ့ အပြင် မိန်းကလေးတွေ ဆိုရင်တော့ ခင်ပွန်းကောင်း တွေရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်(၂)ပုံမှာ ပြထားသည့်အတိုင်း လက်ညှိုး နဲ့ လက်ခလယ်ကြား စနေဂြိုဟ်ခုံနဲ့ ကြာသပတေး ဂြိုဟ်ခုံကြားမှာ ထင်ရှားတဲ့ ညောင်ရွက်သဏ္ဌာန် တစ်ခုသော သင်္ကေတဟာ သင့်ဘဝမှာ အလှူအ တန်း ကြီးကြီးမားမားတွေ ပေးရနိုင်တာတို့၊ ဝန်ထမ်း အကြီးအကဲများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ခင်မင်မှုရရှိတတ် တာတွေရဲ့ နိမိတ်ကို ဖော်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်(၃)ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း လက်ခ လယ်အောက် စနေဂြိုဟ်ခုံပေါ်မှာရှိတဲ့ ကံလမ်း ကြောင်းဟာ အသက်လမ်းကြောင်းကနေတစ်ဆင့် ညဏ်လမ်းကြောင်းနဲ့ နှလုံးလမ်းကြောင်းကို ဖြတ် တက်လာပြီး ယပ်တောင်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်နေတာက တော့ အသက်လတ်ပိုင်းလောက်ကနေ စပြီးတော့ စီးပွားရေး အစစအရာရာ အဆင်ပြေလာပြီး ရာထူး သြဇာအာဏာရှိပြီး ချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ကောင်းတွေ ရရှိလိမ့်မယ်လို့ နိမိတ် ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။
နံပါတ်(၄)ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း လက်ညှိုး နဲ့ လက်ခလယ်ထိပ်တွေမှာ ခုံးဗွေ(ခေါ်) ခေါင်အုပ်ဗွေ ရှိနေတာဟာ အနုပညာ၊ အလှပညာ ဆိုင်ရာ အလုပ် များနဲ့ အကျိုးပေး အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ပုံဖြစ် ပေတယ်။
နံပါတ်(၅)ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း နှလုံး လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေ စတင်ထွက်လာတဲ့ လက်သူ ကယ်အောက် စနေဂြိုဟ်ခုံပေါ်မှာ အောင်မြင်ရေး လမ်းကြောင်း ထွက်လာပြီး ဘေးမှာ အထောက်အကူ လမ်းကြောင်းတွေနဲ့အတူ ထိပ်ပေါ်မှာ ကြာဖူးပုံ ကျောက်မျက်ရတနာသင်္ကေတလေး ရှိနေရင်တော့ သင်ဟာ ကျောက်မျက်ရတနာ ရွှေလုပ်ငန်းများဖြင့် ကြီးပွားအောင်မြင်ကာ အောင်မြင်နေသောသူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်(၆)ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း လက်သန်း အောက် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ခုံပေါ်မှာ နှလုံးလမ်းကြောင်း ပေါ်ကစပြီး ကျန်းမာရေးလမ်းကြောင်း ထွက်ပေါ်လာ ပြီး ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကို ခပ်စွေစွေမျဉ်းတစ်ခု ဖြတ်ထား ရင်တော့ နှလုံးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက် ပြီး အလုပ်တွေမှာ သူတစ်ပါးရဲ့ ရုတ်တရက် အလိမ် ခံရခြင်းတွေ ကြုံတွေ့ရမယ့် နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်(၇)ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း ညဏ် လမ်းကြောင်းနဲ့ နှလုံးသားလမ်းကြောင်း အလယ်မှာ စတုဂံလွင်ပြင်မှ ဗိမာန်သင်္ကေတရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အိုးအိမ်ခြံမြေတိုက်တာ၊ ယာဉ်ရထားတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ကျောင်းဇရပ်စတဲ့ သာသနိက အ ဆောက်အအုံတွေကို လှူဒါန်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ် ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်(၈)ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်းညဏ်လမ်း ကြောင်းဟာ တနင်္လာဂြိုဟ်ခုံဘက်မှာ ငါးရုပ်ပုံသဏ္ဌာန် သင်္ကေတရှိနေတာဟာဖြင့် သင်ဟာ ရေထွက်ကုန်၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းစတာတွေနဲ့ အကျိုးပေးမယ့် နိမိတ် ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်(၉)ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း လက် ဖနောင့်စွန်းမှာ ဒေါင်လိုက်မျဉ်းတွေ ခပ်စောင်းစောင်း ဖြစ်ပေါ်နေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးတွေ သွားရတာတွေ မကြာခဏ လုပ်ရမယ့်နိမိတ် ဖြစ်ပါတော့တယ်။
နိမိတျဖတျလက်ခဏာ ဗဒေပညာနဲ့ပတျသတျ ပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဗဒေငျဟောလာတဲ့သကျတမျး တဈလြှောကျမှာ ဘယျအရာမှ အမှုမဲ့ အမှတျမဲ့မနဘေဲ သသေခြောခြာ ဟောကွားရငျး လလေ့ာထားတဲ့ လက်ခဏာအရေးအကွောငျးလေးတှကေို မှတျစုမှာ မှတျတမျးတငျထားလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီမှတျတမျးလေးတှထေဲကနပွေီး လက်ခ ဏာကို စိတျဝငျစားတဲ့ မညျသူမဆို မိမိတို့ရဲ့လကျ တှဖွေနျ့ကွညျ့ရငျး တိုကျဆိုငျကွညျ့နိုငျအောငျ ရေး သားဖျောပွလိုကျပါတယျ.
နံပါတျ(၁)ပုံမှာ ပွထားတဲ့အတိုငျး အသကျ လမျးကွောငျးကနပွေီးတော့ ထောငျတကျလာတဲ့ လမျးကွောငျးဟာ အပျေါဘကျမှာ ရှိတဲ့Óာဏျလမျး ကွောငျးကို သှားထိနမေယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ စီးပှားဥစ်စာတိုးတကျမယျ၊ အိမျကွီးအိမျကောငျးတှပေိုငျ ဆိုငျပွီးတော့ တနျခိုးသွဇာထကျမယျ့သူ၊ နောကျပွီး အစိုးရဝနျထမျးဆိုရငျတော့ ရာထူးတကျတာတို့၊ ဒီ့ အပွငျ မိနျးကလေးတှေ ဆိုရငျတော့ ခငျပှနျးကောငျး တှရေတတျတယျဆိုတဲ့ နိမိတျဖွဈပါတယျ။
နံပါတျ(၂)ပုံမှာ ပွထားသညျ့အတိုငျး လကျညှိုး နဲ့ လကျခလယျကွား စနဂွေိုဟျခုံနဲ့ ကွာသပတေး ဂွိုဟျခုံကွားမှာ ထငျရှားတဲ့ ညောငျရှကျသဏ်ဌာနျ တဈခုသော သင်ျကတေဟာ သငျ့ဘဝမှာ အလှူအ တနျး ကွီးကွီးမားမားတှေ ပေးရနိုငျတာတို့၊ ဝနျထမျး အကွီးအကဲမြားနှငျ့ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျ ခငျမငျမှုရရှိတတျ တာတှရေဲ့ နိမိတျကို ဖျောဆောငျတာပဲဖွဈပါတယျ။
နံပါတျ(၃)ပုံမှာ ပွထားတဲ့အတိုငျး လကျခ လယျအောကျ စနဂွေိုဟျခုံပျေါမှာရှိတဲ့ ကံလမျး ကွောငျးဟာ အသကျလမျးကွောငျးကနတေဈဆငျ့ ညဏျလမျးကွောငျးနဲ့ နှလုံးလမျးကွောငျးကို ဖွတျ တကျလာပွီး ယပျတောငျပုံသဏ်ဌာနျဖွဈနတောက တော့ အသကျလတျပိုငျးလောကျကနေ စပွီးတော့ စီးပှားရေး အစစအရာရာ အဆငျပွလောပွီး ရာထူး သွဇာအာဏာရှိပွီး ခမျြးသာတဲ့သူတှရေဲ့ အကူအညီ အထောကျအပံ့ကောငျးတှေ ရရှိလိမျ့မယျလို့ နိမိတျ ပွနခွေငျးပဲဖွဈတယျ။
နံပါတျ(၄)ပုံမှာပွထားသညျ့အတိုငျး လကျညှိုး နဲ့ လကျခလယျထိပျတှမှော ခုံးဗှေ(ချေါ) ခေါငျအုပျဗှေ ရှိနတောဟာ အနုပညာ၊ အလှပညာ ဆိုငျရာ အလုပျ မြားနဲ့ အကြိုးပေး အောငျမွငျမယျဆိုတဲ့ နိမိတျပုံဖွဈ ပတေယျ။
နံပါတျ(၅)ပုံမှာပွထားသညျ့အတိုငျး နှလုံး လမျးကွောငျးပျေါကနေ စတငျထှကျလာတဲ့ လကျသူ ကယျအောကျ စနဂွေိုဟျခုံပျေါမှာ အောငျမွငျရေး လမျးကွောငျး ထှကျလာပွီး ဘေးမှာ အထောကျအကူ လမျးကွောငျးတှနေဲ့အတူ ထိပျပျေါမှာ ကွာဖူးပုံ ကြောကျမကျြရတနာသင်ျကတေလေး ရှိနရေငျတော့ သငျဟာ ကြောကျမကျြရတနာ ရှလေုပျငနျးမြားဖွငျ့ ကွီးပှားအောငျမွငျကာ အောငျမွငျနသေောသူမြားနှငျ့ လကျတှဲလုပျဆောငျရမယျဆိုတဲ့ နိမိတျပဲဖွဈပါတယျ။
နံပါတျ(၆)ပုံမှာပွထားသညျ့အတိုငျး လကျသနျး အောကျ ဗုဒ်ဓဟူးဂွိုဟျခုံပျေါမှာ နှလုံးလမျးကွောငျး ပျေါကစပွီး ကနျြးမာရေးလမျးကွောငျး ထှကျပျေါလာ ပွီး ဒေါငျလိုကျမဉျြးကို ခပျစှစှေမေဉျြးတဈခု ဖွတျထား ရငျတော့ နှလုံးနှငျ့ပတျသတျပွီး ကနျြးမာရေးထိခိုကျ ပွီး အလုပျတှမှော သူတဈပါးရဲ့ ရုတျတရကျ အလိမျ ခံရခွငျးတှေ ကွုံတှရေ့မယျ့ နိမိတျဖွဈပါတယျ။
နံပါတျ(၇)ပုံမှာပွထားသညျ့အတိုငျး ညဏျ လမျးကွောငျးနဲ့ နှလုံးသားလမျးကွောငျး အလယျမှာ စတုဂံလှငျပွငျမှ ဗိမာနျသင်ျကတေရှိနမေယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ အိုးအိမျခွံမွတေိုကျတာ၊ ယာဉျရထားတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျပွီး ကြောငျးဇရပျစတဲ့ သာသနိက အ ဆောကျအအုံတှကေို လှူဒါနျးနိုငျမယျဆိုတဲ့ နိမိတျ ဖွဈပါတယျ။
နံပါတျ(၈)ပုံမှာပွထားသညျ့အတိုငျးညဏျလမျး ကွောငျးဟာ တနင်ျလာဂွိုဟျခုံဘကျမှာ ငါးရုပျပုံသဏ်ဌာနျ သင်ျကတေရှိနတောဟာဖွငျ့ သငျဟာ ရထှေကျကုနျ၊ တှငျးထှကျပစ်စညျးစတာတှနေဲ့ အကြိုးပေးမယျ့ နိမိတျ ဖွဈပါတယျ။
နံပါတျ(၉)ပုံမှာပွထားသညျ့အတိုငျး လကျ ဖနောငျ့စှနျးမှာ ဒေါငျလိုကျမဉျြးတှေ ခပျစောငျးစောငျး ဖွဈပျေါနမေယျဆိုရငျ သငျဟာ ပွညျတှငျး ပွညျပ ခရီးတှေ သှားရတာတှေ မကွာခဏ လုပျရမယျ့နိမိတျ ဖွဈပါတော့တယျ။
အိမ်ရှင်များအတွက် အကြော်စုံ ကြော်နည်း နှင့် အချဉ်ဖျော်နည်း လျှို့ဝှက်ချက်